KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Ciidamo Amxaaro ah oo gaaray Guri’ceel & Dagaal ka dhacay Baladweyne
Saturday 24 March 2012 11:10
Ciidamo Amxaaro ah oo gaaray Guri’ceel & Dagaal ka dhacay Baladweyne
BELEDWEYNE (Keydmedia) - In ka badan 3 Qof ayaa ku geeriyootay dagaallo xalay Ciidamada dowladda KMG oo ay Garab ka helaya kuwa Amxaaradda iyo Maleshiyaadka ka tirsan Kooxda Al-shabab-Qaacidda Gudaha Magaalada Beledweyne ee Xaruunta Gobolka Hiiraan.
Xariiro kala duwa oo Keydmedia la sameysay dadka deegaanka ah ayaa sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii Kooxda Al-shabab ay Weerar Hoobiyaal ah ah ku Qaadeen Saldhigyo Ciidamada dowladda iyo Amraaxadda ay ku leeyihiin Xaafadda Buundo wayn oo dhacda Bariga Magaalada Beledweyne.
3 Qof ee ku dhintay Dagaalka ayaa la xaqiijiyay inay ahaayeen Labada dhinaca ee dagaalamay, Majiro wax war ah oo kasoo Maamulka Magaalada Baladweyne ee dowladda KMG iyo Kooxda Al-Shabaab oo ku aadan Dagaalka.
Dhinaca kale Wararka aynu ka helayno Magaaladda Guri-ceel ee Gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi Saakay ay gaareen Ciidamo fara badan oo Amaxaaro ah oo wata 160 Baabuurta dagaalka Uuraal iyo Hub culus.
Ciidamadaasi ayaa islamaantaba waxa ay Saldhig ka sameysteyn Magaaladaasi Guri-ceel, iyadoona la sheegay in ayay ku wajahanyihiin Magaaladda Dhuusamareeb ee Xarunta Gobolka Galgaduud oo haatan ay Gacanta ku hayso Ahlu Sunna Waljamaaca.